လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: February 2016
Canon 70D Users များ Canon 80D ကို Upgrade လုပ်သင့်ပြီလား... ?
Monday, February 22, 2016 နည်းပညာသတင်းနှင့် ဖတ်စရာများ
Canon EOS 80D features.....
-RGB+IR 7560-Pixel Metering
ယခုအသစ်ထွက်တဲ့ Canon 80D ဟာ 70D ကို upgrade လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး sensor အသစ်နဲ့ processor အသစ်တွေ အပါအ၀င် Auto Focus စနစ်တွေမှာ ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲထားတာ တွေ့ရပါတယ်...
Canon 80D ရဲ့ resolution ဟာ 24.2-megapixel ဖြစ်ပြီး APS-C CMOS imaging sensor (Crop frame) အမျိုး အစားဖြစ်ပါတယ်... 70D ပါတဲ့ 20.2MP နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် 80D မှာ resolution ပိုများ လာတာကို တွေ့ရမှာပါ... Image processor ပိုင်းကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း 70D မှာ DIGIC 5+ ကိုသာ အသုံးပြုထားပြီး 80D မှာတော့ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ DIGIC6image processor ကို အသုံးပြု ထားတာ တွေ့ရပါတယ်... ISO ပိုင်းကတော့ သိပ်ပြီးထွေထွေ ထူးထူးတော့ ပြောစရာ မရှိပါဘူး...
Canon 80D မှာ Dual Pixel CMOS AF အပြင် Viewfinder ကနေ မြင်ရတဲ့ autofocusing အပိုင်းတွေကိုလည်း အနည်းငယ် အဆင့်မြင့်တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်... နောက်ပြီး အရေအတွက် များပြားတဲ့ 45 all cross-type AF points တွေ ပါဝင် လာတာ ကလည်း Canon 80D အတွက်ထူးခြားတဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုပါ... 80D ရဲ့ 45 AF points တွေဟာ frame နေရာ အတော် များများကို ခြုံငုံမိအောင် အလျား လိုက်ရော ဒေါင်လိုက်ပါ အဆင်မြှင့်တင်ထားပါတယ်... 70D မှာကတော့ 19 AF points ပဲ ရှိပါတယ်...
နောက်ပြီး F-stop ကို f/8 အထိချပြီး စုစုပေါင်း 27 AF point autofocusing ကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Long supertelephoto lenses တွေနဲ့ teleconverters တွေ အသုံးပြုတဲ့ ကင်မရာသမားတွေလည်း ကျေနပ်သဘောကျ ကြမှာပါ... 70D ကတော့ ဒီလို မစွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ပါဘူး... F-Stop ကို f/5.6 ထိ လျှော့ချပြီး ရိုက်မှသာ အဆင်ပြေမှာပါ... . 80D ရဲ့ low-light focusing အပိုင်းကို ကြည့်ရင်လည်း exposure value -3EV နေရာမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို central focusing ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... 70D ရဲ့ -0.5EV နဲ့ သာ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ... (အသုံးပြုတဲ့ lens ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး AF points အရေအတွက်, cross-type points နဲ့ dual cross-type points တွေ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်...)
Sport events နဲ့ တခြား action တွေကို ဖမ်းယူဖို့ 80D ရဲ့ continuous burst speed ကတော့ အရင် 70D အတိုင်း ပါပဲ... 7fps ပါ... Canon 80D မှာလည်း 7D Mark ll မှာ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Anti-flicker စနစ် ပါဝင် တာကြောင့် Artificial lighting ကို အသုံးပြုပြီး indoor မှာ sport events တွေနဲ့ တခြား actions တွေကို ဖမ်းယူတဲ့ နေရာမှာ အထောက်အကူပြုမှာပါ...
Canon 80D ကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ body အရည်အသွေးကလည်း 70D နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် သိပ်ပြီး မပြောပ လောက်ပါဘူး... 7D series cameras တွေနဲ့ အရွယ်အစား သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ Rebel series လိုမျိုး ကင်မရာတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် Canon 80D ရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ အလေးချိန်း အပိုင်းတွေက သင့်တင့်မျှတပြီး users တွေအတွက် ကိုက်တွယ်ရတာလည်း သက်တောင့်သက်သာ ရှိမှာပါ... 70D ထက် အလေးချိန် သိသိသာသာ ကျဆင်း သွားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်...
80D မှာ DIGIC6processor ကို အသုံးပြုထား တဲ့အတွက် Full HD video တွေကို 60fps အထိ ဖမ်းယူနိုင်ပြီး လျှင်မြန်တဲ့ action video တွေနဲ့ တခြား moving subjects တွေကို ဖမ်းယူတဲ့နေရာ မှာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်.. တခြား features အသစ်တွေလည်း ပါပါသေးတယ်... 70D မှာကတော့ Full HD video က 30fps ပါ...
Video ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ အကောင်း ဆုံး အရည်အသွေးကို ရရှိဖို့ MOV file format ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်... ဒီ format က 90Mbps ALL-I intra-frame compression ကို အသုံးပြုထားပါတယ်... ဒီ Mode ကို သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ 30p နဲ့ 24p (29.97 နဲ့ 23.98 fps စသဖြင့် စသဖြင့်) framerates တွေပဲ ဖမ်းယူ လို့ရမှာပါ...
60p footage ကို ရဖို့ဆိုရင်တော့ MP4-format ကို အသုံးပြုဖို့ လိုပါတယ်... ဒီ format ကတော့ IPB compression ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 60p video အတွက် 60Mbps မှာ ဖမ်းယူပေးနိုင် ပါတယ်... ယခု format ကို 30p နဲ့ 24p framerates တွေနဲ့လည်း ဖမ်းယူနိုင် ပါတယ်... 1080/30p နဲ့ 720/30p ဖမ်းယူတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း အဆင်ပြေပြီး memory card မှာ space စားတာလည်း သက်သာစေပါတယ်...
Canon ရဲ့အဆိုအရ MOV နဲ့ MP4 format ၂ ခုလုံးနဲ့ video recording လုပ်တဲ့နေရာမှာ အများဆုံး ဖမ်းယူချိန်ကို၂၉ မိနစ် ၅၉ စက္ကန့်သာ ကန့်သတ်ထားပါတယ်... သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်ရင် recording က အလိုအလျောက် ရပ်သွားမှာပါ... ဒါပေမယ့် အဲဒီလို သတ်မှတ်ချိန် မရောက်ခင် ကာလမှာတော့ 4GB အရွယ်အစားရှိတဲ့ file size ကို အဆက်မပြတ် ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါတယ်...
Video recording လုပ်မယ့် မိတ်ဆွေတွေ အကြိုက်တွေ့မှာကတော့ ယခု 80D မှာ headphone jack ပါဝင်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်... video recording လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ audio ကို monitoring လုပ်နိုင်မှာပါ... ဒါကလည်း 70D ထက် အားသာစေတဲ့ အချက်ပါ...
Canon 70D လိုပဲ Canon 80D အသစ်မှာလည်း built-in Wi-Fi ပါဝင်ပါတယ်... အသုံးဝင်ပုံကို မိတ်ဆွေတို့လည်း သိပြီးသားဆိုတော့ အကျယ်မရေးတော့ပါဘူး... သူ့ရဲ့နောင်တော်ကြီး 7D Mark ll လိုတော့ built-in GPS မပါရှိပါဘူး... ဒါပေမယ့် GPS Receiver GP-E2 add-on accessory နဲ့ externally တော့ သုံးလို့ရပါတယ်...
ဘက်ထရီ ပါဝါပိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် 80D မှာလည်း 7D mark ll လို အဆင်မြင့်တင် ထားတဲ့ LP-E6N ဘက်ထရီ အမျုိးအစားကို အသုံးပြုထားတဲ့ အတွက် အသုံးပြုချိန် ပိုကြာမှာပါ... နောက်ပြီး 70D အပါအ၀င် ယခင် EOS ကင်မရာတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ LP-E6 ဘက်ထရီ အမျိုးအစားနဲ့လည်း compatible ဖြစ်ပါသေးတယ်... Canon ရဲ့ အဆိုရ အားပြည့်နေတဲ့ LP-E6N ဘက်ထရီနဲ့ flash မသုံးပဲ ပုံပေါင်း ၁၃၉၀ ဝန်းကျင် ရိုက်နိုင်ပြီး live view နဲ့ ဆိုရင်တော့ ပုံပေါင်း ၃၀၀ ဝန်းကျင် ရိုက်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်... (မိမိရွေးချယ် အသုံးပြုတဲ့ setting ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်) battery grip ကလည်း 70D မှာ သုံးတဲ့ grip ကို သုံးနိုင်ပါတယ်...
Media storage ပိုင်းမှာ ဆိုရင်လည်း Canon 80D ဟာ UHS-I compatible ဖြစ်ပြီး SD, SDHC နဲ့ SDXC memory cards အမျိုးအစားတွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်...
အခု 80D နဲ့တွဲပြီး ထူးထူးခြားခြား ထွက်လာတဲ့ EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS Kit lens က USM နဲ့ပါ... Nano USM နည်းပညာကို သုံးထားတဲ့ lens အသစ်ပါ... Crop frame တွေ အတွက်ပါ... USM ကို သုံးထားပေမယ့် အရင် EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS STM Kit lens နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်လည်း ဈေးက မတိမ်းမယိမ်ပါပဲ...
Canon 80D ရဲ့ ဈေးနှုန်းက body only ကို US$1,199 ဝန်းကျင်ရှိပြီး EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM kit lens အသစ်နဲ့ဆိုရင်တော့ US$1,799 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်.... Lens only ဆိုရင်တော့ $599 ဒေါ်လာရှိပါတယ်......။
ဒုတိယ ကွန်ဂိုစစ်ပွဲဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ စတင်ခဲ့ပြီး... ၂၀၀၃ ဇူလိုင်လမှာ တရားဝင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ် (တစ်ချို့က ၂၀၀၂ မှာ တရားဝင် ပြီးဆုံး တယ်လို့ ဆိုပါတယ်)... ဒါပေမဲ့ မငြိမ်သက်မှုတွေတော့ ဆက်ပြီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်...
တရားဝင် စစ်ပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်းမှာ တရက်ကို လူပေါင်း (၁၀၀၀)ခန့် နေ့စဉ် သေဆုံးနေပြီး... လစဉ် သေဆုံးသူ ဦးရေပေါင်း (၄၅,၀၀၀)ခန့် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... သေဆုံးသူ အများစုဟာ ကူးစက်ရောဂါတွေ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ အစားအစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မှုတွေကြောင့် သေဆုံးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်... သေဆုံးသူ ထက်ဝက် ခန့်ဟာ ကလေးငယ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်...
စစ်ပွဲကာလအတွင်းနဲ့ စစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း၂၀၀၈ ခုနှစ် ကာလအထိ သေဆုံးသူ အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၅.၄ သန်း ရှိခဲ့ပါတယ်.. သေဆုံးသူ အများစုဟာ စောစောက ပြောခဲ့သလို ကူးစက်ရောဂါတွေ၊ အာဟာရ ချို့တဲ့မှုတွေနဲ့ အစားအစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး မှုတွေကြောင့်ပါ...
စစ်ပွဲကာလအတွင်း ပြည်သူလူထု သန်းပေါင်း များစွာ ဟာလည်း သူတုိ့ရဲ့ နေအိမ်တွေကို စွန့်ခွာခဲ့ကြပြီး... အိမ်နီးနားချင်း နိုင်ငံတွေမှာ ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်...
ဒုတိယကွန်ဂိုစစ်ဟာ ပထမကွန်ဂိုစစ်တုန်း ကလိုပဲ အမျိုးသမီးတွေကို အတင်းအဓမ္မပြုကျင့် တာကို စစ်လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါ တယ်... စစ်ပွဲအတွင်း ထောင်သောင်းချီတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အဓမ္မပြုကျင့်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်... အများစုဟာ အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်တာကို ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဒီစစ်ပွဲမှာ အာဖရိကတိုက်က နိုင်ငံပေါင်း (၉)နိုင်ငံနဲ့ သီးခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၂၅)ဖွဲ့တို့ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပြီး... အာဖရိကန် သမိုင်းမှာ အသေအပျောက်အများဆုံး စစ်ပွဲတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း သေဆုံးသူ အရေအတွက် အများဆုံး စစ်ပွဲလို့လည်း ဆိုပါတယ်...။
Ref: wikipedia/theguardian/Samir 4one
အာဖရိကမှ Albino ခေါ် မွေးရာပါ တကိုယ်လုံး ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ အာဖရိကန် လူမျိုးတွေကို ပုံတွေမှာ တွေ့ရမှာပါ... လူမည်းတွေ ကြားထဲမှာ ဒီလို ထူးထူးခြားခြား တကိုယ်လုံး ဖြူနေ တာဟာ သူတို့အတွက် အန္တရာယ် အလွန်များတယ်လို့ သိရပါတယ်...
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေ... ကံကောင်းခြင်းတွေ ဖြစ်စေတယ်လို့ အာဖရိကန် လူမည်းတွေက ယုံကြည်ထားကြလို့ပါ...
တံငါသည်တွေ ဆိုရင်လည်း သူတို့ရဲ့ ငါဖမ်း ပိုက်ကွန်တွေကို Albino လူဖြူတွေရဲ့ ဆံပင်တွေနဲ့ ပြုလုပ် ထားကြပါတယ်.... အဲဒီလို လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့် ငါဖမ်းတဲ့အခါ ငါတွေ အမြောက်အများ ရတယ်လို့ ယုံကြည် ထားကြ လို့ပါ...
ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်းက လမ်းလျှောက်တတ်ခါစ ကလေးငယ်တွေ အပါအ၀င် Albino လူဖြူ ၁၅ ဦးခန့် တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရပါတယ်... အချို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြတ်တောက်ခံရပြီး... အချို့မှာတော့ သတ်ဖြတ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ်...
သတ်ရ၊ ဖြတ်ရတာကို သဘောတွေ့တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း စီးပွားရေး ဈေးကွက်လို ဖြစ်နေပါတယ်... အာဖရိကန် လူဖြူတွေရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် တခုလုံးဆိုရင် £50,000 ဈေးပေါက်ပြီး ခြေလက်အဂါင်္ အစိတ် အပိုင်းတွေ ဆိုရင်တော့ ထောင်ဂဏန်းလောက် ရတယ်လို့ သိရပါတယ်...
ယခုနှစ် ၂၀၁၅ မေလ အတွင်းကလည်း တန်ဇန်နီးယား (Tanzania)မှာ Albino အာဖရိကန် လူဖြူ အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးရဲ့ လက်မောင်းကို လူတစ်က ခုတ်ဖြတ်သွားတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းကို Dailymail သတင်းတပုဒ်မှာ ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်.... ဒါဟာ ရာနဲ့ချီတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက တခုပါ...
ဒီလို အာဖရိကန် လူမည်းတွေရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် အထူးသဖြင့် တန်ဇန်နီးယား (Tanzania) နဲ့ ဘူရန်ဒီ (Burundi) နိုင်ငံတွေမှာ Albino အာဖရိကန် လူဖြူတွေဟာ အယူသီး လူမည်းတွေရဲ့ လိုက်လံရှာဖွေ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်မှုတွေကို နေ့စဉ် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်...
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေကလည်း ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်... albino လူဖြူတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကို ဖမ်းဆီးရမိရင် ပစ်သတ်ဖို့ မော်လဝီ(Malawi) တခွင်ရှိ ရဲတွေကို အစိုးရက ပစ်မိန့်ပေးထားပါတယ်... ဒါ့အပြင် တန်ဇန်နီးယား အစိုးရကလည်း albino လူဖြူတွေရဲ့ ကိုယ်အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ တွေ့ရှိတဲ့ မည်သူကိုမဆို အရှင်မထားဖို့ သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်....
အယူသီး အာဖရိကန် လူမည်းတွေ ဘေးအန္တရာယ်က ကင်းဝေးအောင် UN အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြား အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေရှိ ဌာနဆိုင်ရာတွေက albino အာဖရိကန် လူဖြူတွေအတွက် ပညာရေးအပါအ၀င် နေရာထိုင်ခင်းတွေ စီစဉ်ပေးပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပေးထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...။
Facebook ပေါ်က "Poke" ခလုတ်ဟာ လက်ခံ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ မိမိလိုရာကို အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူပြီး အသုံးပြုနေကြ တဲ့ အတွက် ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ Feature တခု ဖြစ်ပါတယ်...
ဖေ့စ်ဘွတ်(Facebook)ပေါ်မှာ တစုံတယောက်က မိမိကို "Poke" လုပ်တာကို ကြုံဖူးသလို... မိမိကနေလည်း တစုံတယောက်ကို "Poke" သွား လုပ်ဖူးကြ မှာပါ... ဖေ့စ်ဘွတ် အသုံးပြုသူတွေ အကြား ဒီလို "Poke" လုပ်တာကို Facebook ယဉ်ကျေးမှု တခုအနေနဲ့ မှတ်ယူ ထားသူတွေ ရှိသလို... စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ တခုဆိုပြီး အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုနေကြ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်...
အခြေခံ အားဖြင့်တော့... Facebook မှာ Poke လုပ်တယ် ဆိုတာဟာ မိမိနဲ့ရင်း နှီးတဲ့ မိတ်ဆွေကို "မတွေ့တာ ကြာပြီနော်... "နေကောင်းရဲ့လား"... "စာပြန်ပါအုံး"... "ဘာတွေလုပ်နေလဲ"... စသဖြင့် သတင်းစကားမေးပြီး သူတို့ထံကနေ အာရုံစိုက်မှု (Attention) ပြန်ရအောင် ပြုလုပ်တဲ့ သဘော ဖြစ်ပါတယ်...
ရင်းနှီးတဲ့ Facebook မိတ်ဆွေတွေ အကြား အပျော် Fun တခုအနေနဲ့လည်း poke ကို သုံးကြပါတယ်...
facebook ပေါ်က လူပျိုနဲ့ ပျိုမေတွေ အကြား ချစ်ရေး ချစ်ရာတွေကိုလည်း Poke လုပ်ပြီးတော့ Attention ယူတာ မျိုးလည်း ရှိပါတယ်... ဥပမာ ဆိုရရင်... မိမိက တစုံတယောက်ကို စိတ်ဝင်စား နေတယ်ဆိုရင် သူ/သူမကို poke လုပ်ပြီးတော့ စိတ်ဝင်စားနေတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အသိပေးတဲ့ သဘောပါ... Facebook မှာ ရုပ်ရည် ချောမောလှပတဲ့ သူတွေဟာ poke လုပ်တာကို မကြာခဏ ကြုံရလေ့ ရှိပါတယ်...
အစောပိုင်းက ပြောခဲ့သလို Poke လုပ် တာကို မိမိလိုရာ အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူ နိုင်တဲ့အတွက် မိမိကို poke လာလုပ်သူ ကို အချိန်ကာလ တခုလောက် စောင့်ကြည့်ပြီး အပျှော် fun တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်တာလား... တခြား ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တာလည်း ဆိုတာကို လေ့လာ သင့်ပါတယ်...
မိမိ friend list ထဲမှာ မရှိသေးတဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်ကို မိမိဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ်... friend အဖြစ် လက်ခံစေချင်တယ် ဆိုရင်လည်း သူ/သူမကို Poke လုပ်ထားလေ့ ရှိပါ တယ်... ဒါဆိုရင် အဲဒီမိတ်ဆွေဟာ မိမိရဲ့ facebook စာမျက်နှာကို လေ့လာခွင့်ရပြီး မိမိကို friend အဖြစ် လက်ခံသင့်/မသင့် စဉ်းစားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
သတိပြုစရာ တချက်လည်း ရှိပါသေး တယ်... မိမိ facebook friends ထဲက မဟုတ်တဲ့ ပြင်ပ တစုံတယောက်က မိမိကို poke လုပ်လာတယ်... မိမိကလည်း ပြန်ပြီး poke back ပြန်လုပ်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့... ဒါဆိုရင် poke လုပ်လာတဲ့သူက မိမိ facebook profile ကို ကြည့့် ရှုဖို့ အခွင့်အလမ်း ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်... poke လုပ်လာတဲ့ လူစိမ်း တယောက်ကို Poke back ပြန်လုပ်လိုက်တာဟာ မိမိအကြောင်းကို သိခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ သဘော ဖြစ်သွားပါတယ်... အကောင်းဆုံးက မိမိ friend list ထဲက မဟုတ်တဲ့ သူတွေက မိမိကို poke လုပ်လာရင် poke back ပြန်လုပ်သင့်/မသင့် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်...
မိမိကို ဘယ်သူတွေက Poke လုပ်ထားလဲ... မိမိက ဘယ်သူတွေကို poke လုပ်ချင်လဲ ဆိုတာကို သိချင်ရင် facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ pokes page စာမျက်နှာမှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်... အောက်က လင့်ခ်ကနေ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ်...
မိမိကို poke လာလုပ်ထားတဲ့ သူတွေကို သံသယ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် pokes page ကနေ တခါတည်း remove လုပ်နိုင် ပါတယ်... တခုရှိတာက pokes page ကနေ poke တခုကို remove လုပ်လိုက်တိုင်း သူ့ဘက်က poke ပြန်လုပ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိနေပါတယ်... remove လည်း မလုပ်ဘူး... poke back လည်း ပြန်မလုပ်ဘူး ဆိုရင်တော့ အဲဒီ မိတ်ဆွေဟာ pokes page ထဲမှာ ဒီအတိုင်းပဲ ရှိနေမှာပါ... မိမိကို poke ထပ်လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး... မျက်စိ နှောက်တယ်ထင်ရင်... အနှောက်အယှက် ပေးနေတယ် ထင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းက block ပစ်လိုက်ရုံပါပဲ....။
မှန်မှန်ကန်ကန် "Poke" နိုင်ကြပါစေ...
(Chat Box ကနေ မေးထားတဲ့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်....)
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ Guangdong ခရိုင်မှာ ငါးဖမ်းလှေ တစ်စီးပေါ်ကနေ တရားမ၀င် တင်ဆောင်လာတဲ့ သင်းခွေချပ်(Pangolin) အရေအတွက် ၂,၆၇၄ ကောင်ကို အကောက်ခွန် အရာရှိတွေက သိမ်းဆည်း ရမိ ခဲ့ပါတယ်… အဆိုပါ သင်းခွေချပ် အသေတွေကို အအေးခံ သေတ္တာ ၄၁၄ လုံးထဲမှာ ထည့်ထားပြီး… စုစုပေါင်း အလေးချိန် ၁၁.၅ တန်ခန့် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်… ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်အတွင်း တရုတ်တောင်ပိုင်းမှာ တရားမ၀င် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်တွေကို ကူးသန်းရောင်းဝယ် ဖောက်ကားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာ အကြီးမား ဆုံးသော ဖြစ်စဉ် တခု ဖြစ်ပါတယ်…
တောရိုင်း သတ္တ၀ါတွေထဲမှာ သင်းခွေချပ် (Pangolins) တွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု ပေးတဲ့အဆင့် ဒုတိယနေရာမှာ ရှိနေပါတယ်… တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရ… နိုင်ငံရဲ့ အဓိက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု ပေးထားတဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ မည်သည့် တောရိုင်း သတ္တ၀ါတွေကိုမဆို တရားမ၀င် ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားတဲ့ သူတွေဟာ ငွေဒဏ်အပါအ၀င် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ထက်မက ကျခံရနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်…
တချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ၀ါရှင်တန် ပြည်နယ်မှာလည်း သင်းခွေချပ် အပါအ၀င် လူတွေကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်တွေကို ရောင်းဝယ် ဖောက်ကား တာဟာ ရာဇ၀တ်မှု တခုဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဥပဒေတခု ပြဌာန်းပေးဖို့ အများရဲ့ သဘောထားကို ဆန္ဒမဲနဲ့ အတည်ပြုခဲ့ ပါတယ်… ဥပဒေချိုးဖောက်သူတွေဟာ အများဆုံး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံ ရမှာဖြစ်သလို ငွေဒဏ် $10,000 ကိုလည်း ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
သင်းခွေချပ်(Pangolin)ဟာ ဘယ်လို သတ္တ၀ါ မျိုးတွေလဲ ဆိုတာ လေ့လာ ကြည့်မယ် ဆိုရင်… သင်းခွေချပ်တွေဟာ အာဖရိကနဲ့ အာရှတိုက်ရှိ အပူပိုင်းဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး၊ ညဘက်တွေမှာသာ ကျက်စားလေ့ ရှိကြတဲ့ ခြေလေးချောင်း နို့တိုက် သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်ပါတယ်… သူတို့ကို “ပုရွှက်စားကောင်” လို့လည်း ခေါ်ဝေါ်ကြ ပါတယ်… သင်းခွေချပ်တွေရဲ့ (လူတွေရဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းနဲ့ အလားသဏ္ဍာန် တူတဲ့) အကြေးခွံ အနေအထားဟာ တခုပေါ်တခု ထပ်လျက်ရှိနေပြီး ရှေးခေတ် သူရဲကောင်းတွေ ၀တ်ဆင်တဲ့ ချပ်ဝတ် တန်ဆာ ပုံစံနဲ့ ဆင်တူနေတာကို တွေ့ရ ပါတယ်… သင်းခွေချပ်တွေဟာ တစုံတရာ (သို့မဟုတ်) တစုံတယောက်က သူတို့ကို အန္တရာယ် ပြုတော့မယ်လို့ ခံစားရရင် ဘောလုံးပုံစံ လှိမ့်ဝင်သွားပြီး သူတို့ရဲ့ ခန္တာကိုယ်ကို အကြေးခွံတွေနဲ့ ဖုံးအုပ် ကာကွယ် တတ်ကြပါတယ်…
သင်းခွေချပ် တစ်ကောင်ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ အရှည် ၃၀ စင်တီမီတာကနေ ၁၀၀ စင်တီမီတာ အထိ (၁၂ လက်မကနေ ၃၉ လက်မထိ) ရှိနိုင်ပါတယ်… ခြကောင်နဲ့ ပုရွှက်ဆိတ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ စားနေကျ အစား အစာတွေဖြစ်ပါတယ်… အစာတွေကို သူတို့ရဲ့ စေးကပ်တဲ့ လျှာတွေနဲ့ တို့ထိဖမ်းယူ စားသောက်ကြတာပါ… လျှာတွေဟာ အဆမတန် ရှည်လျားပြီး ဇောက်နက်တဲ့ တွင်း အခေါင်းပေါက်ထဲရှိ သားကောင်တွေနဲ့ သစ်ပင် အမြင့်တွေပေါ်ရှိတဲ့ သားကောင်တွေ ကို ဖမ်းယူ စားသောက်ရာမှာ အတော်လေး အသုံးဝင်ပါတယ်…
သင်းခွေချပ်တွေမှာ သွားတွေ မပါရှိပါဘူး… အစားအစာတွေကို ခြေဖျက်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ကျောရိုးနဲ့ အစာအိမ်အတွင်းရှိ ကျောက်အငယ်စားလေးတွေကို အသုံးပြု တယ်လို့ လေ့လာ သိရှိရပါတယ်… လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါမှာလည်း ဒယီးဒယိုင် လျှောက်လေ့ရှိပါတယ်…
International Union for Conservation of Nature (IUCN) ရဲ့အဆိုအရ… သင်းခွေချပ် တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တရားမ၀င် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု အများဆုံး ခံရတဲ့ နို့တိုက် သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်… ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း သင်းခွေချပ် အကောင်ရေ ၁ သန်းကျော်ကို တရားမ၀င် ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ခဲ့တယ်လို့ ယူဆ ထားပါတယ်…
သင်းခွေချပ် မျိုးစိတ် (၈)မျိုးကတော့…
1.Manis pentadactyla (Chinese Pangolin) – Critically Endangered
2.Manis javanica (Sunda or Malayan Pangolin) – Critically Endangered
3.Manis culionensis (Philippine Pangolin) – Endangered
4.Manis crassicaudata (Indian or Thick-tailed Pangolin) – Endangered
5.Smutsia temminckii (Cape or Temminck’s ground Pangolin) – Vulnerable
6.Smutsia gigantea (Giant ground Pangolin) – Vulnerable
7.Phataginus tricuspis (Tree or African White-bellied Pangolin) – Vulnerable
8.Uromanis tetradactyla (Long-tailed or Black-bellied Pangolin) – Vulnerable
အာရှမှာ သင်းခွေချပ်တွေကို တောတွေထဲမှာ ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်နေတာကို တားဆီး ဟန့်တား နေစဉ်မှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တရားမ၀င် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုတွေကတော့ ဆက်ပြီး ရှင်သန်နေပါတယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ် အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ဆိုရင်လည်း… လှေပေါ်မှာ အဖမ်းခံရတဲ့ သံသယဖြစ်သူ ၂ ဦး ဟာ အအေးသေတ္တာတွေထဲမှာ အလုံးပိတ် ထည့်ထားတဲ့ သင်းခွေချပ်အသေ ၂,၆၇၄ ကောင်ကို အခကြေးငွေ ယူပြီး နိုင်ငံတကာ ရေပိုင်နက်ထဲမှာ ငါးဖမ်းလှေနဲ့ တရားမ၀င် သယ်ဆောင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်… ပို့ဆောင် ပေးရမဲ့ နေရာကို အောင်မြင်စွာနဲ့ ရောက်ခဲ့ရင် ၄င်းတို့တစ်ဦးလျှင် 10,000 yuan (US$1,580) ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
အချို့ဒေသတွေက လူအတော် များများဟာ သင်းခွေချပ် တွေရဲ့ အသားဟာ နူးညံ့ ပျော့ပြောင်းမှု ရှိတယ်လို့ ဆိုပြီး စားသုံးနေ ကြပါတယ်… ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ၄ ပေါင်(၁ ပေါင် = ၀.၄၅၄ ကီလိုဂရမ်) အလေးချိန်ရှိတဲ့ သင်းခွေချပ်သားဟင်း တပွဲကို ဒေါ်လာ ၇၀၀ ပေးရတယ်လို့ Care2 က ဆိုပါတယ်… ဒါ့ပြင် သူ့ရဲ့ အကြေး ခွံတွေဟာ ဆေးဘက်ဝင် တယ်လို့ ယုံကြည်ထားပြီး တရုတ် တိုင်းရင်း ဆေးတွေမှာ ထည့်သွင်း သုံးစွဲနေကြပါတယ်… Psoriasis ခေါ် အရေပြားရောဂါနဲ့ သွေး လည်ပတ်မှု ဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကိုလည်း ကုသပျောက်ကင်းတယ်လို့ ယူဆ ထားကြောင်း IUCN အစီရင်ခံစာ ကလည်း ဆိုထားပါတယ်…
ဒီအချက်တွေဟာ သင်းခွေချပ်တွေကို ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ဖို့ ရောင်းဝယ် ဖောက် ကားဖို့အတွက် လူတစ်စုကို တွန်းအား ပေးသလို ဖြစ်နေပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံအချို့က အာဏာပိုင်တွေဟာ တရားမ၀င် သင်းခွေချပ် မှောင်ခိုဂိုဏ်းတွေကို မျက်ခြေမပျက် ဆက်လက် စောင့်ကြည့်နေကြ ပါတယ်...
တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေး သမားတွေ ကလည်း World Pangolin Day တွေကို နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယပတ် စနေနေ့တွေမှာ ပုံမှန်ကျင်းပပြီး အတိ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သင်းခွေချပ်တွေကို ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးကြဖို့ အသိပညာ ပေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်....။
ကမ္ဘာမြေကြီး အဓွန့်ရှည်ဖို့အတွက် အကျိုးပြုနေတဲ့ တောရိုင်း တိရိစ္ဆာန်တွေကို ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြပါစို့…..
Save Pangolins! Save Wildlife! Save Environment!
အဖိုးဖြစ်သူက ဒီနေ့ကျောင်းမသွားတဲ့ မြေးကို သူ့ဆရာမ လာနေလို့ တစ်နေရာရာမှာ သွားပုန်း ခိုင်းတယ်...
ဒါပေမယ့် မြေးဖြစ်သူက သူ့အဖိုးကို ဘာပြန်ပြော လိုက်သလဲဆိုတော့...
"သွားပုန်းရမှာက ကျနော်မဟုတ်ဘူး... အဖိုး ဆုံးသွားလို့ဆိုပြီး ဆရာမကို ပြောထားလို့ အဖိုးကသာ သွားပုန်းရမှာ" လို့ ပြန်ပြော လိုက်လေသတည်း.....။
လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook PageTwitter Google+
ညညဉ့်နက်မှ အပြင်ကနေ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ဇနီးသည်ဟာ သူမရဲ့အိပ်ခန်း တံခါးကို တိတ်တိတ်လေး ဖွင့်လိုက်တယ်...
ဒီအချိန်မှာ အိပ်ယာကုတင်ပေါ်မှာ ခြေထောက် ၂ ချောင်းပဲ ရှိရမယ့်အစား ခြေထောက် ၄ ချောင်း စောင်အောက်ပိုင်းကနေ ထွက်နေတာကို တွေ့လိုက်တယ်...
ဇနီးဖြစ်သူလည်း ဒေါသတကြီးနဲ့ ဘေ့စ်ဘောရိုက်တဲ့ ဘက်တံကြီး ရှာပြီး စောင်ပုံကို အားကုန် အဆက်မပြတ် ရိုက်ပါတော့တယ်...
စိတ်ကြိုက် ရိုက်ပြီးလို့ မောသွားချိန်မှာတော့ ရေသောက်ဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်သွား လိုက်တယ်...
မီးဖိုခန်းထဲ ၀င်လိုက်စဉ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ သတင်းစာ ထိုင်ဖတ်နေတာကို တအံ့တသြ တွေ့လိုက်ရတယ်...
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးသည်ကို မြင်မြင်ချင်း ၀မ်းသာအားရနဲ့...
"ဟေးး!!! ဒါလင်...!!! မင်းမိဘ ၂ ပါး ကိုယ်တို့အိမ်ကို အလည်လာတယ်... သူတို့နေဖို့ဆိုပြီး ကိုယ်တို့ အိပ်ခန်းလေး ပေးထားတယ်... သွားပြီး နှုတ်ဆက် လိုက်ပါအုံးကွာ....။"
ညနေခင်း တစ်ခုမှာ... သမီးဖြစ်သူက အဖေဖြစ်သူ အနားကို သွားပြီး...
"ဖေဖေ..!! သမီး ဖေဖေ့ကို အရေးကြီးတဲ့ စကား ပြောချင်လို့... အချိန်ရလားဟင်..."
"ဘာပြောမှာလဲ သမီး... ပြောလေ..."
ဒါနဲ့ သမီးဖြစ်သူလည်း မဝံ့မရဲနဲ့...
"သမီးလေ... ဟိုးးးး အဝေးကြီးမှာ နေတဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြတယ်. ဖေဖေ!!!... သမီးတို့နေတာ အိန္ဒိယမှာ.. ဒါပေမယ့် သူနေတာက အမေရိကားမှာပါ..."
"သမီးတို့ ၂ ယောက်က Dating website တစ်ခုမှာ ပထမဦးဆုံး ဆုံခဲ့ကြပြီး Facebook ပေါ်မှာ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လာတာပါ... ဒီလိုနဲ့ Whatsapp ပေါ်မှာ စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ် ခဲ့ကြတယ်... နောက်ပြီး သူက သမီးကို Skype ပေါ်မှာ စပြီး ချစ်ရေး ဆိုတယ်... အခုဆိုရင် သမီးတို့ ၂ ယောက် Viber ကနေတဆင့် ချစ်သူတွေ ဖြစ်နေကြတာ ၂ လ ရှိသွားပါပြီ... ဖေဖေ..."
"အင်းးး... အဲဒါလေ... ဖေဖေ့ရဲ့ဆန္ဒလေး သိချင်လို့ပါ..."
ဒီအချိန်မှာ အဖေဖြစ်သူက အံ့သြတဲ့လေသံနဲ့... "ဝိုးးး တကယ်လား သမီး!!!" ဆိုပြီး ဆက်ပြော လိုက်တာက...
"ဒါများ ငါ့သမီးရယ်... သမီးတို့ ၂ ယောက် Twitter ပေါ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်... ပြီးရင် Tango ပေါ်မှာ ပျားရည်စမ်းခရီးထွက်... ကလေးလိုချင်ရင်တော့ E-bay ပေါ်ကနေ ၀ယ်ပြီး Gmail ကနေ ပို့ခိုင်းလိုက်... သမီးအမျိုးသားနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တဲ့ အခါကျရင်လည်း သူ့ကို Amazon website ပေါ်မှာ ရောင်းစားလိုက်ပေါ့... သမီးရယ်..." ......တဲ့။
တစ်နေ့မှာ လူငယ်လေး တစ်ဦးဟာ အဖိုးဖြစ်သူ အနားကို သွားပြီး... "ဘ၀တန်ဖိုး ဆိုတာ ဘာလဲ... အဖိုး..?" ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်...
ဒါနဲ့ အဖိုးဖြစ်သူလည်း ကျောက်တုံး တစ်တုံးကို လူငယ်လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပြီး... "ကဲ... ဒီကျောက်တုံးရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘယ်လောက် ရှိလဲ ဆိုတာ သွားစုံစမ်းခဲ့ချေ... ဒါပေမဲ့ ရောင်းတော့ မရောင်းခဲ့နဲ့နော်..." ဆိုပြီး မှာလိုက်တယ်...
iDevice users များအတွက် အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်က စာသားတွေနဲ့ Camera roll/Photo app ထဲက ဓာတ်ပုံတွေကို PDF files အဖြစ် ပြုလုပ် သိမ်းဆည်းနည်း...
Monday, February 22, 2016 iOS Devices ဆိုင်ရာ | Tips & Tricks
iPhone, iPad နဲ့ iPod Touch အသုံးပြုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများ အနေနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်က မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ စာတွေနဲ့ Camera roll/Photo app ထဲက ဓာတ်ပုံတွေကို pdf files အဖြစ် ပြုလုပ်ပြီး device ထဲမှာ ရိုးရှင်း လွယ်ကူစွာ သိမ်းဆည်း ထားလို့ ရပါတယ်... ဒီလို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် တခြားသီးသန့် applications တွေကိုလည်း install လုပ်စရာ မလိုပါဘူး... ဒါပေမဲ့ မိမိ idevice ဟာ နောက်ပိုင်းထွက် iOS 9.x.x version တွေတော့ ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်...
ကဲ... မိမိနှစ်သက်တဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို PDF ဖိုင်လ်အဖြစ် ပြုလုပ် သိမ်းဆည်း ဖို့အတွက်... ဦးစွာအနေနဲ့ မိမိရဲ့ idevice ထဲက Safari ကို ဖွင့်ပါ... မိမိ save လုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ စာမျက်နှာကို ရောက်ရင်... အပေါ်ဘက် ညာဘက်နားမှာ (ပုံပါအတိုင်း) Share icon ကိုတွေ့ပါမယ်... Tap လုပ်ပါ... ဒါဆိုရင် "Save PDF to iBooks" ဆိုတာကို တွေ့ပါမယ် (မတွေ့သေးရင် ဘယ်ဘက်ကို အနည်းငယ် ပွတ်ဆွဲကြည့် ပါ)... ဒါကို Tap လုပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိ လိုချင်တဲ့ စာမျက်နှာကို PDF file အဖြစ် ပြုလုပ်ပေးပြီး iBooks နေရာမှာ အလိုအလျောက် Save လုပ်ပေး သွားပါလိမ့်မယ်...
ဒါ့အပြင်... မိမိတို့ Camera roll (သို့မဟုတ်) Photos application ထဲမှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံကိုလည်း pdf file တစ်ခုထဲအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး အလားတူ iBooks နေရာမှာပဲ Save လုပ် သိမ်းဆည်းလို့ ရပါသေးတယ်... ဒီလို ပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဦးစွာ Photos app မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ် Select လုပ်ပါ... ပြီးရင် အပေါ်ဘက် ဘယ်ဘက်ထောင့်က Share icon ကို Tap လုပ်... Share menu မှာ "Save PDF to iBooks" ဆိုတာကို Tap/click လုပ်ပါ... ဒါဆိုရင် ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံကို စီစဉ်တကျနဲ့ pdf file တစ်ခုအဖြစ် ပြုလုပ်ပေးသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ... ဒါပေမဲ့ ဒီ pdf file တွေကို iCloud Drive ကို ပို့ဖို့အတွက် ဒီ feature က support မလုပ်ပါဘူး... အချို့ users တွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာ အချက်တစ်ခု ဖြစ်မှာပါ...
ချုပ်ပြီးပြောရရင်... ဒီ feature ဟာ အင်တာနက်ပေါ်က web စာမျက်နှာတွေကို pdf files တွေအဖြစ် အလွယ်တကူ သိမ်းဆည်းချင်၊ စုဆောင်းချင်တဲ့ အချို့သော idevice users မိတ်ဆွေတွေအတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်... ဓာတ်ပုံတွေကို အီးမေးလ် ပေးပို့တဲ့ အခါမှာလည်း တစ်ပုံချင်း စီ file တွေ အများကြီး ပို့စရာမလိုပဲ ဓာတ်ပုံ အများအပြားကို ဒီနည်းအတိုင်း pdf file တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ပေးပို့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်....။
(မသိသေးတဲ့ idevice users မိတ်ဆွေများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်...)
iOS Devices ဆိုင်ရာ, Tips & Tricks,
တစ်ခါတုန်းက... ရွာတစ်ရွာမှာ အလွန်ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး နေထိုင်ကြတယ်...
တနေ့မှာတော့... ဇနီးသည်ဟာ သူမရဲ့ ဆံပင်တွေ အရမ်းရှည်နေပြီး ရှုပ်ထွေး နေလို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ခေါင်းဖြီးဘီး တစ်ချောင်း ၀ယ်ခိုင်းတယ်...
ဒီအချိန်မှာ ဇနီးသည်ထံက စကားကို ကြားလိုက်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ စိတ်ထိခိုက်သွားပြီး... သူမအတွက် ခေါင်းဖြီးဘီး ၀ယ်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်း .... မကြာခင်က ပျက်သွားတဲ့ သူ့ရဲ့ နာရီကြိုးလေး ပြင်ဖို့အတွက်တောင် ငွေကြေး အလုံအလောက် မရှိတဲ့ အကြောင်း ဇနီးသည်ကို ပြောဆို ရှင်းပြ လိုက်တယ်...
ဇနီးဖြစ်သူကလည်း သူမ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း အတွက် ခင်ပွန်းသည်ကို ဆက်ပြီး အတင်းအကျပ် မတောင်းဆိုတော့ဘူး...
တစ်နေ့... ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ အလုပ်ကို သွားနေရင်း လမ်းဘေးက နာရီဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ သူ့နာရီကြိုး အပျက်လေးကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းလိုက်တယ်... ပြီးတော့ ဇနီးသည်အတွက် ခေါင်းဖြီးဘီး တစ်ချောင်း ဝယ်လိုက်တယ်...
ခင်ပွန်းသည်ဟာ ညနေပိုင်း အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ကိုပြန်လာတယ်... ဇနီးသည်ကို ပေးဖို့အတွက် လက်ထဲမှာလည်း ဘီးအသစ်လေးကို အဆင်သင့် ကိုင်လာတယ်...
ဒီလိုနဲ့... အိမ်ရောက်တဲ့အခါ ဇနီးဖြစ်သူ ဆံပင်အတိုနဲ့ ဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက်တော့ သူ အရမ်း အံ့အားသင့် သွားတယ်... အရမ်းလည်း စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်... ဇနီးသည်ရဲ့ လက်ထဲမှာ နာရီကြိုး အသစ်လေး တစ်ချောင်း ကိုင်ထား တာကိုလည်း တွေ့လိုက်တယ်...
ဇနီးဖြစ်သူဟာ ခင်ပွန်းသည်အတွက် နာရီကြိုး အသစ်တချောင်း ဝယ်ပေးဖို့ ငွေလိုနေတဲ့အတွက် သူမ အလွန်နှစ်သက်တဲ့ ဆံပင်တွေကို ဖြတ်ပြီး ရောင်း ချခဲ့တာပါ...
နောက်ဆုံးတော့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးဟာ...
သူတို့အကြား တစ်ဦးရဲ့ဆန္ဒကို တစ်ဦးက အပြန်အလှန် ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ လုပ်ရပ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး မျက်ဝန်းကိုယ်စီမှ မျက်ရည်များ စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်း လျက်..........။
"နှစ်ခု"ပေါင်းတော့ 'အရာအရာ'... ဖြစ်ပါသတဲ့....။
စစ်မှန်တဲ့ အချစ်နဲ့ အေးအတူ ပူအမျှ သက်ဆုံးတိုင်အောင် အပြန်အလှန် ချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်......
To love + To be loved = Everything...!
အလုပ်မှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသား တစ်ဦးဟာ အိမ်က ဇနီးသည်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောလိုက်တယ်...
"ဟန်နီ!!! ကိုယ်... ကနေဒါကို ငါးမျှားခရီး ထွက်ရမယ်လို့ ကိုယ့်သူဌေးက ပြောတယ်... သူလည်းပါတယ်... ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေလည်း အများကြီး ပါတယ်..."
"အဲဒီမှာ တစ်ပတ်လောက် ကြာမယ်... ဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် တကယ့် အခွင့်အလမ်းကောင်းပဲ... ကိုယ် လိုချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ..."
"ဆိုတော့... ကိုယ့်အတွက် အ၀တ်အစားတွေကို တစ်ပတ်စာ လုံလောက်အောင် စီစဉ်ပြီး ခရီးဆောင် အိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပေး... ငါးမျှားတံနဲ့ ငါးမျှား သေတ္တာလည်း ပြင်ထားပေးကွာ... ကိုယ်တို့က ရုံးကနေလာမယ်... ပြီးတော့ အိမ်မှာ အဲဒီပစ္စည်းတွေ ၀င်ယူပြီး တန်းသွားမယ်...
"အို့!!! ဒါနဲ့.. ကိုယ့်ရဲ့ အပြာရောင် ည၀တ် အကျီင်္လေးပါ ထည့်ထားပေး ပါအုံးကွာ..."
ဇနီးသည်အနေနဲ့ စိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းလေး မသင်္ကာဖွယ်ရာ ဖြစ်လာပေမဲ့ ဇနီးကောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ ခင်ပွန်းခိုင်းတာ အားလုံးကို လုပ်ပေးလိုက်တယ်...
တပတ်ကြာပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အိမ်ပြန်လာတယ်... သူကြည့် ရတာ နည်းနည်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေတာကလွဲလို့ အားလုံးဟာ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ...
ဇနီးသည်က သူ့ကို ကြိုဆိုပြီးတော့ ငါးတွေ အများကြီး ရခဲ့လားလို့ မေးလိုက်တယ်...
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက.. "အေးကွ!!! ဆော်လမွန်ငါးတွေ အများကြီး ရတယ်... နောက်ပြီး Bluegill ငါး အချို့နဲ့... ဓားရှည်နှုတ်သီးငါး (Swordfish) အနည်းငယ်လည်း ရတယ်ကွ... ဒါနဲ့!!! နေပါအုံး... ကိုယ်ထည့်ခိုင်း လိုက်တဲ့ အပြာရောင် ည၀တ်အကျီင်္ကို ဘာဖြစ်လို့ မထည့်ပေး လိုက်တာလဲ..."
ဒီအချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူက... "ကျမ ထည့်ပေး လိုက်တာပေါ့... အဲဒါက ရှင့်ရဲ့ ငါးမျှား သေတ္တာထဲမှာလေ.....။"
(ကိုယ်ချစ်တဲ့၊ ခင်မင်တဲ့ သူတွေကို မုသား မဆိုမိပါစေနဲ့... )
အိပ်ယာထဲမှာ အတော်လေး နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ဘေးမှာ ထိုင်စောင့် ပေးနေတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ဘက်ကို လှည့်ပြီး လေသံ ဖျော့ဖျော့နဲ့.....
"ဟန်နီ!!! ရှင့်ကို ကျမ ၀န်ခံစရာတွေ ရှိတယ်..."
"သက်တောင့်သက်သာ နေပါ မိန်းမရယ်... မင်း မောနေပါ့မယ်..."
ခင်ပွန်းသည် တားနေတဲ့ကြားက ဇနီးဖြစ်သူက.....
"မရဘူး... မရဘူး... ကျမ ပြောမှဖြစ်မယ်... ဒါမှ ကျမ သေတဲ့အခါ ကျမရဲ့ဝိညာဉ်က ကောင်းကောင်း အနားယူနိုင်မှာ..." ဆိုပြီး ဆက်ပြောလိုက်တယ်...
"ကျမလေ ရှင့်ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ခိုးပြီး ကျမရဲ့ တိတ်တိတ်ပုန်း ရည်းစားကို ပေးခဲ့တယ်... ကျမတို့ရဲ့သား ဂျူနီယာရဲ့ အဖေကလည်း ရှင်မဟုတ်ဘူး... နောက်ပြီး ရှင့်ရဲ့ ရွှေလက်ပတ်နာရီကို ခိုးတဲ့ သူကလည်း ကျမပါပဲ... အဲဒီနာရီကို ယူပြီး ရှင့်ရဲ့ ညီမအိတ်ထဲမှာ သွားဖွက် ထားတာပါ... ရှင် သူ့ကို ကျမတို့ အိမ်ကနေ မောင်းထုတ်အောင် လို့ပါ... ဒါတွေ အားလုံးအတွက် ရှင် ကျမကို ခွင့်လွှတ်ပါ..."
ခင်ပွန်းဖြစ်သူက လေသံ ခပ်အေးအေးလေးနဲ့.....
"ဒါတွေ အားလုံးကို ငါသိပါတယ် မိန်းမရယ်... အဲဒါကြောင့်လည်း မင်းကို အခုလို အဆိပ် ခတ်လိုက်တာပေါ့.....။"
You are conditioned to believe you couldn't...?
တစ်နေ့မှာ လူတစ်တယောက်ဟာ နေရာ တစ်ခုအနားက ဖြတ်လျှောက်သွားစဉ် သစ်ပင်တွေမှာ ကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားတဲ့ ဆင်အုပ်ကြီး တစ်အုပ်ကို တွေ့လိုက်တယ်... ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ဆင်ကြီးတွေကို ခြေတောက်မှာ ကြိုးငယ်လေး တစ်ချောင်းနဲ့ ထိမ်းချုပ် ထားတာကို မြင်လိုက်ရတော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီး လမ်းလျှောက် နေရင်းကနေ ရုတ်တရက် ရပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တယ်...
ဒီဆင်ကြီးတွေကို သံကြိုးတွေ... ခြံတွေနဲ့ ခတ်ပြီး ထိမ်းသိမ်း ထားတာလည်း မဟုတ်... တကယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ ခြေတောက်တွေမှာ ချည်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီး ဘယ်အချိန်မဆို ရုန်းထွက်လို့ ရနိုင်နေတယ်... ဒါပေမယ့် ဘယ်လို အကြောင်း အရင်းနဲ့မှ ရုန်းထွက်ဖို့ သူတို့ မကြိုးစားကြဘူး...
ဒါနဲ့ သူလည်း အနီးအနားမှာ ရှိနေတဲ့ ဆင်ထိန်းကို... "ဒီဆင်ကြီးတွေက ဘာဖြစ်လို့ ရုန်းထွက်ဖို့ မကြိုးစားပဲ ဒီအတိုင်း ရှိနေကြတာလဲ" လို့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ မေးလိုက်တယ်...
ဒီအခါမှာ ဆင်ထိန်းက... "ဒီဆင်ကြီးတွေ ငယ်ရွယ်စဉ် အခါကလည်း ယခု သူတို့ကို ချည်နှောင်ထားတဲ့ ကြိုးအရွယ်အစားကိုပဲ အသုံးပြုပါတယ်... ဒီကြိုး အရွယ်အစားဟာ သူတို့ငယ်စဉ်မှာ ရုန်းကန်တဲ့အခါ ပြတ်မထွက် သွားအောင် ကောင်းကောင်း ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်... ဒီလိုပုံစံနဲ့ သူတို့တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီကြိုးတွေကနေ ရုန်းထွက်လို့ မရနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုထဲ ပုံစံ ၀င်သွားပါတယ်... ကြိုးတွေဟာ သူတို့ အရွယ်ရောက် လာတဲ့အထိ ဆက်ပြီး ထိမ်းချုပ် ထားနေဆဲပဲလို့ ယုံကြည်နေ ကြတယ်... အဲဒါကြောင့် ဘယ်လို အကြောင်းအရင်းနဲ့မှ ရုန်းထွက်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး..." လို့ ပြန်ဖြေ လိုက်တယ်...
ဆင်ထိန်းရဲ့စကားကြောင့် သူ အံ့သြသွားတယ်... ဒီဆင်ကြီးတွေဟာ သူတို့ကို ချည်နှောင်ထားတဲ့ အချုပ်အနှောင်တွေကနေ ဘယ်အချိန်မဆို ရုန်းထွက်လို့ ရနေတယ်... ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တစ်ခါက ရုန်းထွက်တာ မအောင်မြင်ခဲ့လို့ အခုလို ကြီးပြင်း လာတဲ့အခါမှာလည်း ရုန်းထွက်လို့ မရနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ထဲ တဖြည်းဖြည်း အသားကျလာတယ်... နေမြဲ အတိုင်းပဲ နေနေကြတယ်...
ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီဆင်ကြီးတွေလိုပဲ တစ်ချိန်တုန်းက တစ်စုံတရာကို ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အပေါ် မအောင်မြင်ခဲ့လို့ လုပ်မရနိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုထဲ ပုံစံသွင်းတာ ခံနေရပြီလား...? ဘ၀မှာ ကျရှုံးတယ် ဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ သင်ယူနေရမယ့် သင်ခန်းစာ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါ... ဒီရလာဒ်တွေကြောင့် ဘယ်တော့မှ စိတ်မပျက်သင့်သလို... ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့သင့်ပါဘူး... အောင်မြင်မှု ဆိုတာဟာ အဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းနေမှုရဲ့ ရလာဒ်သာ ဖြစ်ပါတယ်....။
ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဘတ်စ်ကားပေါ်ကို တက်လာတယ်... လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ တုတ်ကောက် အဖြူတစ်ချောင်းနဲ့ သူမ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းကို ဂရုတစိုက်နဲ့ စူးစမ်းနေတယ်... ကားပေါ်က ခရီးသည်တွေ အားလုံးကလည်း သူမကို သနား ဂရုဏာ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်နေကြတယ်... ကားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံတွေကို လက်နဲ့ လိုက်စမ်းနေတယ်... ဒီအချိန်မှာ ကားဒရိုင်ဘာ ရောက်လာပြီး ခရီးသည် မရှိတဲ့ ထိုင်ခုံလွတ် နေရာကို လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်... ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ချလိုက်တယ်... ရုံးသုံးအိတ်ကို သူမရဲ့ ပေါင်ပေါ်မှာ တင်လိုက်ပြီး တုတ်ကောက်ကိုတော့ ခြေတောက်ဘေးမှာ မှီပြီး ထောင်ထား လိုက်တယ်...
အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ "စူဆန်" အမည်ရ အမျိုးသမီး တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်... သူမ မျက်မမြင် ဒုက္ခိတဘ၀ ရောက်နေတာ ယခုဆိုရင် ၁ နှစ် ရှိနေပါပြီ... ဆေးမှားယွင်းမှုကြောင့် အခုလို အမြင်အာရုံတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ... ရုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ ဒီကြမ္မာဆိုးကြီးက သူမကို ဒေါသစိတ်၊ နာကျည်း စိတ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သနားဂရုဏာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့အတူ အမှောင်လောကထဲကို တွန်းပို့ခဲ့ တယ်... သူမရဲ့ဘ၀ အရာအားလုံးအတွက် အားကိုးရမယ့်သူ... တွယ်တာရမယ့် သူဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ "မက်ခ်" တစ်ဦးသာ ရှိခဲ့တယ်...
မက်ခ်ဟာ လေတပ်အရာရှိ စစ်သည် တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်... ဇနီးဖြစ်သူ စူဆန်ကို သူ့နှလုံးသားနဲ့ ထပ်တူ ချစ်တယ်... ဇနီးဖြစ်သူ ပထမဦးဆုံး အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးလိုက်လို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေချိန်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး... သူမ လိုအပ်နေတဲ့ စိတ်ခွန်အားတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ပြန်လည်ရရှိလာအောင် ကူညီပံ့ပိုးပေး သွားမယ်လို့ သံဓိဌာန် ချခဲ့တယ်...
အချိန်အနည်းငယ် ကြာပြီးတဲ့နောက်... စူဆန်ဟာ အလုပ်ပြန်ဆင်းဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလို့ သူမကိုယ်သူမ ယုံကြည်နေတယ်... ဒါပေမယ့် အလုပ်နေရာကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်း သွားလာ မလဲ...? အရင်က ဘတ်စ်ကားစီးပြီး အလုပ်သွားနေကျ ဆိုပေမယ့် အခုဆိုရင် သူမ တစ်ယောက်တည်း ဒီလိုသွားလာဖို့ အရမ်းကြောက်လန့်နေတယ်... ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မက်ခ်ရဲ့ အလုပ်နေရာနဲ့ ဇနီးသည် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာတွေဟာ မြို့စွန်းနှစ်ဘက်မှာ တနေရာစီ ရှိနေကြတယ်... ဒါပေမယ့် မက်ခ်ဟာ ဇနီးသည် အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို နေ့စဉ် ကားနဲ့လိုက်ပို့ ပေးခဲ့တယ်... ဒါဟာ အစပိုင်းမှာတော့ စူဆန်ကို ကျေနပ် နှစ်သိမ့်မှုတွေ ဖြစ်စေခဲ့သလို မျက်မမြင် ဇနီးသည်ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု ပေးဖို့ မက်ခ်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်း ဖြည့်ဆည်း ပေးခဲ့တယ်...
သို့သော်... မကြာခင်မှာပဲ ဒီအစီအစဉ်ဟာ ရေရှည် အဆင်မပြေဘူးလို့ မက်ခ်က နားလည်လိုက်ပြီး ဇနီးသည်ကို အလုပ်ကို ဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲ သွားခိုင်းဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်... ဒီအစီအစဉ်ကို ဇနီးဖြစ်သူအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း သူ တွက်ဆထားတယ်... ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ... ဇနီးသည်ဟာ မက်ခ်ရဲ့ ဘတ်စ်ကား စီးပြီး အလုပ်သွားရမယ် ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို စတင် ကန့်ကွက်ပါတော့တယ်...
"ကျမဟာ မျက်မမြင် ဒုက္ခိတ တစ်ယောက်ပါ" ဆိုပြီး ဇနီးသည်က ခါးခါးသီးသီး တုန့်ပြန်လိုက်တယ်.. "ကျမ သွားနေတဲ့ နေရာကို ကျမ ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ... ရှင် ကျမကို စွန့်ပစ် ထားတယ်လို့ ကျမ ခံစားရတယ်..."
စူဆန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် မက်ခ်ဟာ သူ့နှလုံးသားတွေ ကွဲကြေမတက် ခံစားလိုက်ရတယ်... ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်ကိုတော့ ရုတ်မသိမ်းခဲ့ဘူး... အဲဒီအစား ဇနီးသည် မနက်ပိုင်း အလုပ်သွားချိန်နဲ့ ညနေပိုင်း အလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာ သူမ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာပြီး တကိုယ်တည်း သွားလာနိုင်တဲ့ အချိန်ထိ အချိန်ဘယ်လောက်ပဲ ကြာပါစေ သူမနဲ့အတူ ဘတ်စ်ကား လိုက်စီးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်... တကယ်လည်း အစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ခဲ့တယ်... ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လုံးလုံး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မက်ခ်ဟာ လေတပ် ၀တ်စုံအပြည့် ၀တ်ဆင်လျက် ဇနီးသည်ကို အလုပ်သွား အလုပ်ပြန် ဘတ်စ်ကား အတူတူစီးပြီး နေ့စဉ် အဖော်လုပ်ပေးခဲ့တယ်...
တချိန်တည်းမှာပဲ မက်ခ်ဟာ မျက်မမြင် ဇနီးသည်ကို သူမဘယ်နေရာမှာ ရောက်နေတယ်... ပတ်ဝန်းကျင် အသစ်မှာ ဘယ်လို လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိအောင် နေထိုင်သွားလာ ရမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် အကြားအာရုံပေါ်မှာ မှီခိုအားထားဖို့ လမ်းညွှန် သင်ကြား ပေးခဲ့တယ်... နောက်ပြီး သူမကို ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက် ဘတ်စ်ကား ဒရိုင်ဘာတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လာအောင်လည်း ကူညီပေးခဲ့တယ်...
နောက်ဆုံးမှာတော့ စူဆန်ဟာ သူမကိုယ်သူမ ယုံကြည်မှု ရှိလာပြီး ခင်ပွန်းသည် မပါပဲ အလုပ်ကို တယောက်တည်း သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်... ဒီလိုနဲ့ တနင်္လာနေ့ မနက်ပိုင်း အလုပ်မသွားခင်အချိန် သူမရဲ့ ယာယီ ဘတ်စ်ကား စီးဖော်လည်းဖြစ်... ခင်ပွန်းသည်လည်းဖြစ်... အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေလည်း ဖြစ်တဲ့ မက်ခ်ကို သူမရဲ့ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ သိုင်းဖက်လိုက်တယ်... ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ သူမအပေါ် ထားရှိတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ... စိတ်ရှည်သည်းခံမှု... သစ္စာရှိမှုတွေအတွက် သူမရဲ့ မျက်ဝန်းအိမ်မှာ ကျေးဇူးတင်တဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ပြည့် နှက်နေတယ်... အဲဒီနောက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် နှုတ်ဆက်ပြီး အလုပ်နေရာကို တစ်ယောက်တစ်လမ်းစီ ထွက်ခွာ သွားကြတယ်... မျက်မမြင် စူဆန်ဟာ တနင်္လာ၊ အဂါင်္၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး... နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အလုပ်ကို အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာနဲ့ သွားလာ နေခဲ့တယ်... ဒီလို တယောက်တည်း သွားလာနေရတာကို သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်တယ်လို့တော့ သူမ ဘယ်တော့မှ မခံစားရဘူး... ဒါပေမယ့် သွားမြဲတိုင်း သွားနေခဲ့တယ်...
သောကြာနေ့ နံနက်မှာ စူဆန်ဟာ ထုံးစံအတိုင်း အလုပ်ကို ဘတ်စ်ကား စီးပြီး သွားခဲ့တယ်... ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဆင်းဖို့ ကားခ ပေးနေစဉ်မှာ ကားဒရိုင်ဘာက "တကယ်ကို အားကျမိတယ်ဗျာ.." လို့ ပြောလိုက်တယ်... ကားသမားက သူမကို ပြောနေတာလား... တခြား တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောနေတာလားဆိုတာ စူဆန် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတယ်... နောက်မှ သူမကို ပြောနေတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်... 'တနှစ်လုံးလုံး မျက်မမြင် ဒုက္ခိတဘ၀ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ သတ္တိတွေမွေးပြီး အကြိတ်အနယ် ကြိုးစားနေရတဲ့ ဒီလို အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ အားကျတဲ့သူက ရှိသေးလား...?? လို့ စဉ်း စားလိုက်ပြီး သိချင်စိတ်နဲ့..."ရှင်က ကျမကို ဘာဖြစ်လို့ အားကျတယ်လို့ ပြောရတာလဲ" လို့ ဒရိုင်ဘာကို မေးလိုက်တယ်...
ဒီအချိန်မှာ ကားဒရိုင်ဘာက... "ခင်ဗျားလိုပဲ ဂရုစိုက်ပေးတဲ့သူတွေ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ သူတွေ ရှိရင် ကောင်းမယ်ဗျာ..." လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်... ကားဒရိုင်ဘာ ပြောနေတာကို နားမလည် ဖြစ်နေတဲ့ စူဆန်က..."ရှင် ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ" လို့ ပြန်မေးလိုက်တယ်...
ကားဒရိုင်ဘာက... "ခင်ဗျားလည်း သိတာပဲဗျာ... ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လုံးလုံး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေတပ်ယူနီဖောင်း ၀တ်စုံအပြည့်နဲ့ ရုပ်ရည်သန့်သန့် လူကြီးလူကောင်း တစ်ယောက်က ခင်ဗျား ကားပေါ်က ဆင်းတဲ့အခါတိုင်း ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဂရုတစိုက်နဲ့ စောင့်ကြည့်ပေးနေတယ်... ပြီးတော့ ခင်ဗျား လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ အခါမှာလည်း ဘေးအန္တရာယ် ကင်းအောင် ကူညီပေးတယ်... ခင်ဗျား ရုံးအဆောက်အဦထဲကို ၀င်သွားတဲ့ အခါမှာလည်း ဂရုတစိုက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေတယ်... နောက်ပြီး ခင်ဗျားကို အဝေးကနေ လှမ်းပြီး အာဘွား ပေးတယ်... ပြီးတော့ အလေးပြုပြီး ထွက်သွားတာပါပဲ... ခင်ဗျားဟာ အတော်လေး ကံကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါပဲ..." လို့ ရှင်းပြလိုက်တယ်...
ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေကြောင့် စူဆန်ဟာ အရမ်းပျှော်သွားပြီး သူမရဲ့ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကနေ ၀မ်းသာမျက်ရည်တွေ စီးကျလာတယ်... ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို မမြင်ရပေမဲ့ သူမရဲ့ မျက်စိ ရှေ့မှောက်မှာ သူဟာ အမြဲတမ်း ရှိနေတယ်... အမြဲတမ်း မြင်တွေ့ နေရတယ်လို့ ခံစားရတယ်... သူမဟာ အရမ်း ကံကောင်းတယ်... ခင်ပွန်းဖြစ်သူ မက်ခ်ဟာ သူမကို အမြင်အာရုံထက် ပိုပြီး စွမ်းအားပြင်းတဲ့ လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်တယ်... သူမအနေနဲ့ ယုံကြည်အောင် ကြည့်ဖို့ မြင်ဖို့ မလိုအပ်တဲ့ လက်ဆောင် တစ်ခု... အဲဒါကတော့... အမှောင်ထု ရှိတဲ့နေရာကို အလင်းရောင်တွေ ဆောင်ကျဉ်းပေးလာတဲ့ 'အချစ်လက်ဆောင်' တစ်ခုပါပဲ....။
တစ်နေ့မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ အလိမ်ဖော်တဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ် ၀ယ်လာတယ်... ဒီစက်ရုပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က အမှန်အတိုင်း မပြောပဲ လိမ်ညာပြီး ပြောတဲ့ သူတွေကို ပါးရိုက်ပြီး ဒဏ်ခတ်တယ်...
ဒီလိုနဲ့ သူဟာ မိသားစု စုံလင်တဲ့ ညစာစားတဲ့ အချိန်မှာ သားဖြစ်ကို စမ်းသပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်... "ငါ့သား! မင်း မနေ့ညက ဘယ်ကို သွားသလဲ?"
"ကျွန်တော် စာကြည့်တိုက်မှာ ရှိပါတယ် ဖေဖေ "... လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ စက်ရုပ်က သူ့ကို ပါးဖြတ်ရိုက် လိုက်တယ်...
ဒါနဲ့ သားဖြစ်သူလည်း... "ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာပါ" ဆိုပြီး ၀န်ခံလိုက်ရတယ်...
"ဘာသွားလုပ်တာလဲ" လို့ အဖေက ဆက်ပြီး မေးလိုက်တဲ့အခါ သားဖြစ်သူက... "Toy Story ကာတွန်းကား သွားကြည့်တာပါ" လို့ ဖြေလိုက်တယ်... ဒီတစ်ခါလည်း စက်ရုပ်က သူ့ကို ပါးဖြတ်ရိုက် လိုက်ပြန်တယ်...
ဒါနဲ့ သားဖြစ်သူလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ ၀န်ခံလိုက်ရပြန်တယ်..." လူကြီးကား (Porn) သွားကြည့်တာပါ"
"ဘာကွ!!! ငါ မင်းအသက် အရွယ်လောက်က Porn ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိသေးဘူး" လို့ ဆိုပြီး အဖေဖြစ်သူက ဒေါသတကြီး ပြောလိုက်တယ်... ဒီအချိန်မှာ စက်ရုပ်က သူ့ကိုပါ ပါးဖြတ်ရိုက် လိုက်တယ်...
ဒါကို မြင်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့..."အဲဒါ ရှင့်သားပဲလေ!!!" ဆိုပြီး ပြောလိုက်ချိန်မှာ ဒီတစ်ခါ ဇနီးသည်ပါ အရိုက်ခံရလေ သတည်း....။
ဒေါသထွက်နေတဲ့ ဇနီးသည်ဟာ အပြင်မှာ ရောက်နေတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်ပြီး... "ရှင်က အခု ဘယ်နေရာမှာ သွားပြီး အလေလိုက် နေတာလဲ?"... လို့ မေးလိုက်တယ်...
ခင်ပွန်းသည်က လေသံ ခပ်အေးအေးနဲ့..."ဟေး ဟန်နီ!!! ဟိုတစ်နေ့ကလေ မင်း မြင်ပြီး သဘောကျတယ်လို့ ပြောတဲ့ စိန်လည်ဆွဲလေးလေ... အေး! အဲဒီ ရွှေဆိုင်ကို မှတ်မိသေးလား?...
ခင်ပွန်းသည် စကားကြောင့် ဒေါသအရှိန် အနည်းငယ် လျော့ကျသွားတဲ့ ဇနီးသည်က..."အင်းး! မှတ်မိတာပေါ့... ဒါလင်!!!"...
"အေးး... အဲဒီနေ့က မင်းအတွက် ၀ယ်ပေးမလို့ ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံ မရှိဘူးလေ..." ခင်ပွန်းသည်က ဆက်ပြီး... "ပြီးတော့ တစ်နေ့ကျရင် ၀ယ်ပေးမယ်လို့ ကိုယ်ပြောခဲ့ တာလေ... မှတ်မိသေးတယ်... ဟုတ်"
ဒီတစ်ခါတော့ ဇနီးသည်ဟာ ဒေါသအရှိန် လုံးဝ လျော့ကျသွားတယ်... ပြီးတော့ မျက်နှာပေါ်မှာလည်း အပြုံးနဲ့ ရှက်သွေးဖြန်းနေပြီး... "အင်းးး! မှတ် မိ ပါ တယ် ဆို... ချစ်ကလည်း..."
ဒီအခါ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက..." အေးး ဟုတ်ပီ... ကိုယ် အဲဒီဆိုင်ရဲ့ဘေးက ဘီယာဆိုင်မှာ ရှိနေတယ်...."။
သတိပြုရမယ့် Dry Drowning နဲ့ Secondary Drowning...
Monday, February 22, 2016 ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
မကြာသေးခင်က အင်တာနက်ပေါ်မှာ သတင်း တစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုလိုက်ရပါတယ်... အဲဒါကတော့... အမေရိကန်နိုင်ငံက အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦး အိမ်နီးနားချင်းက ရေကူးကန် တစ်ခုမှာ ရေသွားကစားရာကနေ ပြန်လာပြီး သူဟာ အတော်လေး နွမ်းနယ်နေတဲ့အကြောင်း၊ အရမ်းလည်း အိပ်ချင်နေတဲ့အကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူကို ပြောပြီး အိပ်ယာထဲမှာ သွားအိပ် လိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်... မိခင်ဖြစ်သူကလည်း ကလေးတွေရဲ့ သဘာဝအရ တနေ့ကုန် ကစားထားလို့ ပင်ပန်းတာလို့ ယူဆထားပြီး သားဖြစ်သူကို သံသယ မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်...
ခဏအကြာ သားဖြစ်သူကို သွားကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ပါးစပ်ကနေ အမြုပ်တွေ ထွက်ပြီး အသက် မရှုတော့တာကို တအံ့တသြ တွေ့လိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. ဆေးရုံကို အလျင်အမြန် ပို့ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေက ကလေးဟာ Dry drowning ကြောင့် ဆုံးသွားပြီလို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်...
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Dry drowning ရေ မတော်တဆဖြစ်တဲ့သူ ဦးရေဟာ ၁ နှစ်ကို ခန့်မှန်းခြေ ၄,၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး... သူတို့ထဲက အရေအတွက် ၄၀၀ ကနေ ၆၀၀ လောက်ဟာ နှစ်စဉ် အသက် ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်...
Dry Drowning နဲ့ Secondary Drowning ဆိုတာ ဘာလဲ?
မိမိအပါအ၀င် ကလေးမိဘတွေဟာ ကလေးတွေကို ရေကူးကန်တွေ၊ ရေချိုးခန်းတွေမှာ ရေပေးချိုး၊ ရေပေး ကစားလေ့ ရှိပါတယ်... ဒီလို ကစားပြီးလို့ ရေအပြင်ဘက် ရောက်တာနဲ့ ရေဘေးအန္တရာယ် မရှိတော့ဘူးလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်... တကယ်တော့ Dry drowning နဲ့ Secondary drowning ဆိုတာဟာ ရေထဲမှာ ရှိနေစဉ် ရေနစ်သေဆုံးတာ မဟုတ်ပဲ... ကလေးတွေ ရေချိုး၊ ရေကစားပြီးလို့ ခန္ဓာကိုယ်က ရေတွေကို ခြောက်သွေ့အောင် တဘက်နဲ့သုတ်၊ အ၀တ်အစားလဲ... စသဖြင့် ဒီလိုလုပ်နေချိန် နာရီပိုင်း အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ရေမရှိတဲ့နေရာမှာ ရေနစ်သေဆုံးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ မှတ်သား ရပါတယ်...
ဒီလိုပုံစံနဲ့ ရေနစ်တာဟာ... ကလေးတွေ သူတို့ ကိုယ်တိုင် ရေကန်ထဲမှာ ရေကစားနေတဲ့အချိန် (ဒါမှမဟုတ်) ကလေးမိဘတွေက သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါင်းကို ရေထဲနှစ်ပြီး ကစားနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ မတော်တဆ (ရေမွန်းပြီး) ရေတွေကို သူတို့ရဲ့ နှာခေါင်းတွေကတဆင့် ရှူသွင်း မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်...
Dry drowning ရေနစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေ အကြောင်းအရင်း တွေ ကတော့... ရေကစားနေစဉ်အတွင်း ကလေးငယ် မတော်တဆ ရှူရှိုက်မိလိုက်တဲ့ ရေတွေဟာ အဆုတ်ထဲထိ ရောက်ရှိမသွားပဲ လေ၀င်အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းကို ရုတ်တရက် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခု ဖြစ်စေ ပါတယ်... ဒီလိုနဲ့ ကုန်းပေါ် ရောက်တဲ့ အချိန် Asphyxiation ခေါ် အောက်ဆီဂျင် လုံလောက်စွာ မရရှိတော့ပဲ အသက်ရှူမ၀တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
Secondary drowning (Delayed drowning လည်း ခေါ်ပါတယ်) ကတော့ Dry drowning နဲ့ အနည်းငယ် ကွာခြားပါတယ်... သူကတော့ ကလေးငယ် ရှူသွင်းလိုက်မိတဲ့ ရေတွေဟာ ပွင့်နေတဲ့ လေလမ်းကြောင်းအတိုင်း အဆုတ်ထဲကို ရောက်ရှိ နေရာ ယူသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်... အဆိုပါ အဆုတ်ထဲရှိ ရေတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း လည်ပတ်နေတဲ့ သွေးထဲသို့ အောက်ဆီဂျင် ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေပြီး... နောက်ဆုံး ဦးနှောက်ကပါ အောက်ဆီဂျင် လုံလောက်စွာ မရတော့တဲ့ထိ ပြဿနာ ဖြစ်လာပါတယ်... ဒီလို အခြေအနေကို 'Pulmonary edema' လို့လည်း ခေါ်တယ်လို့ သိရပါတယ်...
Dry drowning ရေနစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက အများအားဖြင့် ရေ မတော်တဆဖြစ်ပြီး ခဏ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး... Secondary drowning ရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေ မတော်တဆဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁ နာရီကနေ ၂၄ နာရီအတွင်း (တချို့ဆေးစာတွေမှာ ၁ နာရီကနေ ၇၂ နာရီကြား) မှာ စတင် ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ Children's Hospital of Pittsburgh ရဲ့ အရေးပေါ် ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ Raymond Pitetti က ဆိုပါတယ်...
ဒီလို ရေမတော်တဆမှုဟာ လူကြီးတွေမှာလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေလို ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု မရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုပြီး အဖြစ်များတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဒေါက်တာ Pitetti က ပြောပါတယ်...
၂ မျိုးလုံးဟာ အတော်လေး ဖြစ်ခဲတဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်... ရေနစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အားလုံးထဲမှာ ဒီလိုပုံစံနဲ့ ရေနစ်တာဟာ ၁ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်း အကြား မှာသာ ရှိတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Florida Hospital Tampa ဆေးရုံက ဒေါက်တာ James Orlowski ကလည်း ဆိုထားပါတယ်... ဒါပေမယ့် သတိတော့ ထားရပါမယ်...
Dry Drowning နဲ့ Secondary Drowning ၂ မျိုးလုံးမှာ တူညီတဲ့ လက္ခဏာ တွေကတော့ အသက်ရှူရ ခက်ခဲခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ဘက်အောင့်ခြင်း၊ အလွန့်အကျွံ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် လာခြင်း.... တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် ကလေးဟာ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြစ်ခြင်း စတဲ့ အမူအရာ ပြောင်းလဲ လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်... ဒီလက္ခဏာတွေ အားလုံးဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက်က အောက်ဆီဂျင် လုံလောက်စွာ မရရှိတဲ့သဘော သက်ရောက်နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဒီလက္ခဏာတွေ အားလုံးကို ကလေးမိဘတွေက သတိမပြုမိဘဲ အချိန်မီ မကုသဘူးဆိုရင် အသက် ဆုံးရှုံးတဲ့အဆင့်ထိ ရောက်လာနိုင်ပါတယ်....
မိမိရဲ့ကလေးဟာ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့အတိုင်း ရေကစားပြီးတဲ့အချိန် Dry Drowning နဲ့ Secondary Drowning တွေထဲက ရှေ့ပြေး လက္ခဏာ တစ်ခုခု ပြနေပြီဆိုရင် နီးစပ်ရာမှာ ဆေးရုံမှာ ဆေးဝါး အကူအညီ ရယူပါ... မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ပါ... ဒီလက္ခဏာတွေဟာ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး ဆေးစစ်တာတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ကလေးငယ်တွေ ရေကူးကန်၊ ရေချိုးကန်တွေမှာ ရေကစားစဉ် Water Safety ရေလုံခြုံမှု ရှိပြီး ရေမတော်တဆမှုက ကင်းဝေးစေဖို့ အတွက် American Academy of Emergency Medicine က အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ Mark Reiter က ကလေးမိဘတွေကို...
(၁) ရေထဲ (ဒါမှမဟုတ်) ရေအနီးအနားမှာ ရှိနေတဲ့ ကလေးတွေကို အမြဲတမ်း မျက်ခြေမပျက် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့...
(၂) ကလေးတွေကို အသက်ကယ် ပစ္စည်းတွေ ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာသာ ရေကစားခွင့် ပြုဖို့နဲ့..
(၃) ရေကစားတဲ့ ကလေးတွေကိုလည်း လူကြီးတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာ ရှိစေဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်....။
(မိမိလို မသိသေးတဲ့ ဘ၀တူ ကလေး မိဘများအတွက် ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရေးသား တင်ပြပေး လိုက်တာပါ... Cause and Effect နဲ့ Prevention အပိုင်းကိုသာ တင်ပြလိုတဲ့အတွက် ဆေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများ ရေးထားတာ မရှင်း မလင်း ဖြစ်ခဲ့ရင် မိမိရဲ့ အားနည်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်...)
ထောင်ကျနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဇနီးသည်ထံက အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားတဲ့ စာတစ်စောင် လက်ခံ ရရှိခဲ့တယ်...
"ယောက်ျား... ကျမတို့အိမ်ရဲ့ အနောက်ဘက် ခြံထဲမှာ ဆလတ်ရွက်တွေ စိုက်ပျိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်... ဘယ်အချိန်မှာ စိုက်ပျိုးရင် ကောင်းမလဲ..."
ထောင်မှာ ၀င်ထွက်နေတဲ့ စာမှန်သမျှကို ထောင်စောင့်တွေက ခိုးဖတ်တာကို သိထားတဲ့ အကျဉ်းသားက ဇနီးဖြစ်သူကို အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်...
"ချစ်ဇနီး... တခြား ဘာပဲလုပ်လုပ် အိမ်နောက်ဘက်က ခြံကိုတော့ မထိပါနဲ့ကွာ... ကိုယ့်ရွှေတွေအားလုံး အဲဒီနေရာမှာ မြုပ်ထားလို့ပါ..."
တပတ်လောက် ကြာပြီးတဲ့နောက် အကျဉ်းသားဟာ ဇနီးသည်က ပို့လိုက်တဲ့ နောက်ထပ် စာတစ်စောင်ကို အောက်ပါအတိုင်း လက်ခံ ရရှိခဲ့တယ်...
"ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာ ရှင်သိလား... လူတစ်အုပ် ပေါက်တူးတွေ ဂေါ်ပြားတွေနဲ့ ကျမတို့အိမ်ကို ရောက်လာပြီး အနောက်ဘက် ခြံတစ်ခြံလုံး တူးဆွသွားကြတယ်..."
ဒါနဲ့ အကျဉ်းသားလည်း နောက်ထပ် စာတစ်စောင်ရေးပြီး ဇနီးသည်ကို အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်...
"ချစ်ဇနီး... ယခုအချိန်ဟာဆိုရင် ဆလတ်ရွက်တွေ စိုက်ပျိုးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်တယ်....။"
တခါတုန်းက တောအုပ်တစ်အုပ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကျီးကန်း တစ်ကောင်ရှိတယ်... သူဟာ သူ့ဘ၀ကိုယ်သူ အကြွင်းမဲ့ ကျေနပ်နေပြီး ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ခဲ့တယ်... ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ သူဟာ ငန်းတစ်ကောင်ကို တွေ့ခဲ့တယ်... "ဒီငန်းဟာ အရမ်းဖြူတယ်... ငါကျတော့ အရမ်း မည်းတယ်... သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ရွှင်ဆုံး သတ္တဝါ ဖြစ်ရမယ်..." လို့ ထင်လိုက်တယ်...
ဒါနဲ့ ငန်းကို သူထင်မြင်တာတွေ ပြောပြလိုက်တဲ့အခါ ငန်းက... "ဟုတ်ပါတယ်... အဆွေကျီး... အကျွန်ုပ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျှော်ရွှင်ဆုံး ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်တယ်လို့ အမှန်တကယ် ခံစားခဲ့မိပါတယ်... ဒါပေမယ့် အခု အရောင်နှစ်ရောင်နဲ့ ကြက်တူရွေး တစ်ကောင်ကို မြင်တွေ့ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သူသာလျှင် အပျှော်ရွှင်ဆုံး ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်..." လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်...
ဒီလိုနဲ့ ကျီးကန်းလည်း ကြက်တူရွေးထံ သွားပြီး မေးလိုက်တယ်... ဒီအခါ ကြက်တူရွေးက... "အဆွေကျီး... အကျွန်ုပ်ဟာ ဥဒေါင်းငှက် တစ်ကောင်ကို မတွေ့ခင်အချိန်က အင်မတန် ပျှော်ရွှင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်... အကျွန်ုပ်မှာ အရောင် ၂ မျိုးသာ ရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် ဥဒေါင်းငှက်မှာ အရောင်မျိုးစုံ ရှိပါတယ်..." လို့ ရှင်းပြလိုက်တယ်...
အဲဒီနောက် ကျီးကန်းဟာ တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဥဒေါင်းငှက်ထံ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့တယ်... တချိန်တည်း မှာပဲ ဥဒေါင်းငှက်ကို စုပြုံကြည့်ရှုနေကြတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ လူတွေကိုလည်း သူတွေ့လိုက်တယ်... လူရှင်းသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဥဒေါင်းငှက်အနား ကပ်ပြီး... "အဆွေ ဥဒေါင်းငှက်... သင်ဟာ အရမ်းကို လှပတင့်တယ်ပေတယ်... နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ထောင်သောင်းချီတဲ့ လူတွေကလည်း သင့်ကို လာရောက် ကြည့်ရှုကြတယ်... လူတွေက အကျွန်ုပ်ကို တွေ့တဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် ချက်ချင်း ခြောက်လှန့် မောင်း ထုတ်ကြတယ်... ဒါကြောင့် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျှော်ရွှင်ဆုံး ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်... "ဆိုပြီး ပြောလိုက်တယ်...
ဒီအခါမှာ ဥဒေါင်းငှက်က... "အဆွေကျီး... အကျွန်ုပ်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလှပဆုံးနဲ့ အပျှော်ရွှင်ဆုံး ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်တယ်လို့ အမြဲတမ်း ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမယ့်... အကျွန်ုပ်ရဲ့ အလှအပတွေကြောင့် တိရစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ အခုလို ပိတ်လှောင် ခံထားရတယ်... အကျွန်ုပ် ဒီတိရစ္ဆာန်ရုံကြီးကို သသေချာချာ လေ့လာကြည့်ပြီးပါပြီ... အဆွေကျီးတို့ဟာ လှောင်အိမ်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ခြင်း မခံရတဲ့ ငှက်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်... အကျွန်ုပ်သာ အဆွေကျီးလို ငှက်တစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာကိုမဆို လွတ်လပ်ပျှော်ရွှင်စွာ ဒုန်းစိုင်းလိုက်ချင်ရဲ့လို့တောင် ဟိုတလောက စဉ်းစားနေမိပါ သေးတယ်..." လို့ ဆိုပြီး ဖြေကြားလိုက်တယ်.....။
(ကိုယ့်ကိုကိုယ် အခြားသူတွေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုတွေ လုပ်မိရင် ဝမ်းနည်းမှု၊ စိတ်ပျက် အားငယ်မှုတွေသာ ဖြစ်စေပြီး ပျှော်ရွှင်မှု ဆိတ်သုဉ်းစေတဲ့ သံသရာ စက်ဝန်းထဲကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်ရှိ သွားနိုင်ပါတယ်.... မိမိမှာ ဖြစ်တည်ပြီးသား အရာတွေကိုသာ တန်ဖိုးထားပါ... ကျေနပ်ရောင့်ရဲပါ... ဒါဆိုရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျှော်ရွှင်ဆုံး လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါ လိမ့်မယ်...)
"နှင်းဆီတစ်ပွင့်ဟာ ဘယ်သောအခါမှ နေကြာပန်း တစ်ပွင့် မဖြစ်နိုင်သလို... နေကြာပန်း တစ်ပွင့်ဟာလည်း ဘယ်သောအခါမှ နှင်းဆီတစ်ပွင့် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး... ပန်းအားလုံးမှာ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ အလှကိုယ်စီ ရှိပြီးသားပါ...." _Miranda Kerr
"သင့်ကိုယ်သင် အခြာသူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေတာတွေကို ရပ်တန့်လိုက်တဲ့ အချိန်ဟာ ပျှော်ရွှင်မှု အစပြုတဲ့ အချိန်ပါပဲ..." _Anonymous
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် လူငယ်တစ်ဦးနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူတို့ ရထားစီးပြီး ခရီးသွားနေကြတယ်...
လူငယ်ဟာ ရထားပြူတင်းပေါက်ကနေ သူ မြင်တွေ့နေသမျှ အရာတွေကို အဖေဖြစ်သူကို အသံအကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ပြီး ပြောနေတယ်...
"အဖေရေ့!!... ဟိုးမှာကြည့်ပါအုံး သစ်ပင်တွေက အနောက်မှာ သွားနေကြတယ်..."
ဒီအချိန်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူက သားကိုကြည့်ပြီး ပြုံးနေတယ်... ဒါပေမယ့် အနီးအနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ ခရီးသွား စုံတွဲတစ်တွဲက အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ လူငယ်ရဲ့ ကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမူကို စိုက်ကြည့်နေကြတယ်... ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ လူငယ်က သူ့အဖေကို အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ အော်ပြီး ပြောလိုက်ပြန်တယ်...
"အဖေ!!... ဟိုးအပေါ်က တိမ်တွေကိုလည်း ကြည့်ပါအုံး ကျနော်တို့နဲ့အတူ လိုက်ပြေးနေကြတယ်..."
ခရီးသွားစုံတွဲလည်း ဆူညံနေတာကို သည်း မခံနိုင်တော့ပဲ လူငယ်ရဲ့ဖခင်ကို... "ခင်ဗျားရဲ့သားကို ဘာဖြစ်လို့ ဆရာဝန် ကောင်းကောင်းနဲ့ သွားမပြရတာလဲ..." လို့ ဆိုပြီး မေးလိုက်တယ်...
ဒီအခါ လူငယ်ရဲ့ဖခင်က ပြုံးပြီးတော့... "သူ့ကို ဆရာဝန်နဲ့ ပြခဲ့ပြီးပါပြီ.. အခုလေးတင်ပဲ ဆေးရုံကနေ ပြန်လာကြတာပါ... ကျနော့သားက မွေးကတည်းက မျက်စိမမြင်ရပါဘူး... ဒီနေ့မှ သူ့မျက်လုံးတွေ စပြီး မြင်ရတာပါ..." လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်....။
(လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကိုယ်စီဘ၀ ရှိနေကြလို့ သူတို့အကြောင်းကို ခရေစေ့တွင်းကျ မသိသေးပဲ အပြင်ပန်းအားဖြင့် ကြည့်ပြီး အကဲမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့.... သူတို့ရဲ့ ဘ၀အမှန်ကို သင် သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ သေချာပေါက် အံ့သြမိမှာပါ....)